Ahoana ny fomba fampidinana raki-peo WhatsApp amin'ny iOS sy Android | Vaovao momba ny gadget
Ahoana ny fomba fampidinana raki-peo WhatsApp amin'ny iOS sy Android
WhatsApp Nanjary lasa mandeha ho azy ny fampiharana fandefasan-kafatra mailaka be mpampiasa eran-tany. Vitsy ny mpampiasa, na ny iOS na ny Android dia ireo izay mbola tsy nalaim-panahy hametraka azy io amin'ny fitaovany ary hampiasa azy isan'andro hiresahana amin'ny namana na fianakaviana. Ho fanampin'izay, efa elaela izay, tsy ny hafatra ihany no nanjary tena zava-dehibe, fa ny hafatra am-peo kosa lasa nanjary zava-dehibe.
Mihabetsaka hatrany ny hafatra an'ity karazana ity izay andefasanao anay, ary azo antoka fa imbetsaka tamin'ny fotoana iray no naniry ny hampidina azy ireo hitazomana azy ireo mandrakizay. Ity, izay iraka tsy azo tanterahina ho an'ny maro, dia tsy izany, ary mba hampisehoana aminao anio dia tianay ny hanazava azy amin'ny fomba tsotra ato amin'ity lahatsoratra ity ny fomba fampidinana ireo raki-peo WhatsApp amin'ny iOS sy Android izay andefasanao na azonao avy amin'ireo olona ifandraisanao.
1 Ahoana ny fampidinana raki-peo WhatsApp amin'ny iOS
2 Ahoana ny fampidinana raki-peo WhatsApp amin'ny Android
3 Tehirizo ny hafatra am-peo WhatsApp anao dia hanana harena ianao
Ahoana ny fampidinana raki-peo WhatsApp amin'ny iOS
Toy ny mahazatra, ny fanatanterahana ny dingana rehetra dia manahirana kokoa, amin'ny ankamaroan'ny tranga, ho an'ny mpampiasa iOS, ary amin'ity indray mitoraka ity dia tsy ho afa-maina. Voalohany indrindra, ny misintona rakipeo WhatsApp amin'ny iray amin'ireo fitaovana Apple dia ampidino ny fampiharana Documents 5, izay azonao jerena ao amin'ny App Store avy amin'ny rohy izay asehonay anao eto ambany;
Azo antoka fa efa fantatrao ity fampiharana ity, fa amin'ny tsy fahaizanao indrindra dia tsy maintsy milaza aminao izahay fa hahafahanao mamaky na milalao saika ny rakitra rehetra tahirizinao amin'ny fitaovanao. Ankehitriny dia tsy maintsy mandeha any amin'ny WhatsApp isika ary manaraka ireto dingana manaraka ireto.
Safidio ny hafatra audio tianao hotehirizina
Tsindrio lava ny hafatra mandra-pisehoan'ny safidy
Safidio ny safidy "resend"
Tsindrio izao ilay kisary izay hiseho eo amin'ny faritra ambany ankavanan'ny efijery, izay efa-joro misy zana-tsipika manondro, ary safidio ny "mail" na ny mpandrindra mailaka izay ampiasainay matetika
Ao anatin'ny mailaka dia tsindrio ilay miraikitra, izay ilay feon-tsehatra WhatsApp, ary ho hitantsika indray ilay kisary miaraka amin'ilay zana-tsipìka miakatra, amin'ity indray mitoraka havia ity ihany. Tsindrio eo ary safidio ny safidy "ampio amin'ny iCloud Drive"
Farany dia tsy maintsy misafidy ny safidy "Documents by Readdle" ianao
Raha tsy mamela anao hilalao feo WhatsApp avy amin'ny Documents 5 ianao dia aza manahy fa ny kinova farany an'ny WhatsApp dia manova ny audio ho endrika hafahafa ho an'ny fampiharana maro hafa antsoina hoe .opus. Ny vahaolana dia ny fampidinana ny VLC ho an'ny iOS ary aondraho any ireo naoty audio mba hahafahanao mihaino azy ireo isaky ny tianao nefa tsy misy olana.
Ahoana ny fampidinana raki-peo WhatsApp amin'ny Android
Ireo karazan-javatra rehetra ireo dia mora kokoa ny mitondra amin'ny fitaovana miaraka amin'ny rafitra fiasa Android napetraka ao anatiny. Amin'ity tranga ity dia tsy maintsy ataontsika amin'ny alàlan'ny fampiharana File Explorer izany, ahafahantsika maka azy io maimaimpoana amin'ny magazay fampiharana Google ofisialy na izay Google Play mitovy. Eo ambany etsy ambany dia manana rohy alaina ianao;
Raha vantany vao tafapetraka isika dia tsy maintsy miditra amin'ilay rindranasa ary mitady ilay fampirimana WhatsApp, izay hitantsika ao anaty fitehirizan'ilay fitaovana na ao amin'ny SD, miankina amin'ny fomba nanamboarantsika azy.
Izao ianao izao ao anatin'ny fampirimana WhatsApp dia tokony mankany amin'ny "Media" ianao ary ao anatiny mankany amin'ny "WhatsApp Vice". Amin'ity fampirimana ity dia ahitanao ireo hafatra am-peo izay voarainay, ary ao amin'ilay fampirimana "WhatsApp Audio" no ahitanao ireo izay nalefanao. Ireo rakitra rehetra ireo dia azo lalaovina, alefa ary zaraina amin'ny olona mihitsy aza.
Tehirizo ny hafatra am-peo WhatsApp anao dia hanana harena ianao
Mihabetsaka ny fifandraisantsika amin'ny alàlan'ny Hafatra am-peo WhatsApp, ny sasany dia tena harena izay tokony hotehirizintsika rehetra. Raha mpampiasa mahazatra ny fampiharana fandefasan-kafatra eo no eo ianao dia aza misalasala manomboka mitahiry ireo raki-peo azonao satria vetivety dia afaka manana fanangonana be dia be ianao izay hahafaly anao vetivety.
Mazava ho azy, araka ny efa nolazainay taminao, ny fitahirizana hafatra am-peo WhatsApp dia ho mora kokoa aminao amin'ny fitaovana misy rafitra fiasa Android noho ny iPhone, saingy efa noheverinao sahady izany tamin'ny andro namoahanao ny iPhone na iPad.
Nahavita nitahiry ireo hafatra am-peo WhatsApp ve ianao nefa tsy nanana olana be loatra?. Lazao aminay ao amin'ny habakabaka voatokana ho an'ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity na amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy misy anay. Lazao anay ihany koa raha fantatrao ny fomba hafa hitehirizana ireo hafatra am-peo ary raha mandeha izany dia ampidirinay avy hatrany ao anatin'ity lahatsoratra ity hahafahan'ny rehetra mampiasa azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Ahoana ny fomba fampidinana raki-peo WhatsApp amin'ny iOS sy Android
Android 7.0 dia misy amin'ny OnePlus 3 sy OnePlus 3T
Samsung dia manolotra ny Galaxy A3, Galaxy A5 ary Galaxy A7 2017